कोरोना भाइरस र रूघाखोकीमा समानता र फरक के छ? [भिडियो] :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कल्पना पौडेल मंगलबार, असोज २७, २०७७, ११:४६:००
विस्तारै जाडो मौसम सुरु हुन थालेको छ। मौसममा आएको यो परिवर्तनसँगै धेरै मानिसहरुलाई मौसमी रुघाखोकीको समस्या पनि देखिन थालेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण र मौसमी रुखाखोकी गराउने इन्फ्लुएञ्जा भाइरस संक्रमणको लक्षण उस्तैउस्तै हुने भएकाले के भएको हो भन्ने अलमल हुनसक्छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा मौसमी रुघाखोकीको संक्रमण भयो भने पनि धेरै मानिसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नै भयो कि भन्ने लाग्न सक्छ।
त्यसैले कोरोना भाइरस वा इन्फ्लुएन्जा भाइरसमध्ये के भएको हो भनेर कसरी थाहा पाउने? कुन भाइरसको संक्रमण भएको हो भनेर थाहा पाउने लक्षण के–के हुन्?
यही प्रश्न हामीले सरुवा रोग विशेषज्ञ र नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिसँग सोधेका छाँै।
कोरोना र इन्फ्लुन्जा दुवै भाइरस भए पनि फरक भाइरस भएको बताउँछन् नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्वप्रतिनिधि डा जोस भ्यान्देलियर।
उनले दुवै भाइरसले लाग्ने रोगका लक्षण पनि केही हदसम्म समान हुने बताए। उनका अनुसार रुघाखोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, जिउ दुख्नु, थकाइ लाग्नु र पसिना आउनु जस्ता लक्षण कोरोना भाइरस र इन्फ्लुन्जा भाइरसका समान लक्षण हुन्। त्यसबाहेक यी दुवै संक्रमण मानिसले खोक्दा र थुक्दा निस्कने छिटाका माध्यमबाट सर्छ।
लक्षण र सर्ने तरिका समान भए पनि कोरोना भाइरस र इन्फ्लुन्जा भाइरसबीच भिन्नता पनि छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन यदि मानिसले स्वाद र गन्ध थाहा पाउने शक्ति गुमाएको छ वा कमै हुँदै गएको छ भने कोरोना संक्रमण हुनसक्ने बताउँछन्।
नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्वप्रतिनिधि डा भ्यान्देलियरले कोरोना भाइरस र इन्फ्लुञ्जा भाइरस मानिसको उमेरका आधारमा पनि फरक रहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘कोरोना भाइरसभन्दा इन्फ्लुन्जा भाइरस छिटो अरुलाई सर्छ। रोगको गम्भीरताका आधारमा पनि यी दुई रोग फरक छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणले व्यक्तिलाई धेरै नै गम्भीर बनाउँछ भने यसका तुलनामा फ्लु संक्रमण भएर गम्भीर बिरामी पर्नेको अनुपात निकै कम छ।’
उनका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणले सबै उमेर समूहका बिरामी गम्भीर भएका देखिन्छन् र यस्तो अवस्था फ्लुमा पनि देखिन्छ। तर गर्भवती र बालबालिकामा फ्लुको जोखिम बढी हुन्छ भने यस्ता व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमणको कम जोखिममा देखिएका छन्।
इन्फ्लुञ्जा भाइरस संक्रमण हुने समयको सुरुवात भइसकेको र कोरोना भाइरसको जोखिम पनि यथावत् रहेकाले कहिलेकाहीँ कुन संक्रमण भएको हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। दुवै भाइरस एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत सरसफाइ नियमित गर्दा दुवै भाइरसको जोखिमबाट भने बच्न सकिन्छ।
कहाँ–कहाँ भण्डारण गरिँदै छ कोभिड भ्याक्सिन? कुन प्रदेशमा कति क्षमता?
को बन्ला काठमाडौं विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति?
प्लास्टिक सर्जरी गर्न विदेश धाइरहनु पर्दैन
नयाँ रूपको कोरोना भाइरस नेपालमा फैलिने जोखिम कति? शनिबार, पुस १८, २०७७
पिसिआरको विकल्प एन्टिजेन परीक्षण हुन सक्दैन : विज्ञ [भिडियो] सोमबार, मंसिर २२, २०७७
गम्भीर लक्षण भएका कोरोना संक्रमित पनि होम आइसोलेसनमा आईतबार, कात्तिक २३, २०७७
बर्दियाका थारु समुदायका ११ दशमलब ३ प्रतिशतमा सिकल सेल ५ घण्टा पहिले
जिपी कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रद्वारा विभिन्न २५ पदका लागि ७० जना कर्मचारी माग ७ घण्टा पहिले
शुक्रबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? ८ घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा २७० संक्रमित थपिए, ५ जनाको मृत्यु ८ घण्टा पहिले
जापानमा गैरआवासीय विदेशीलाई प्रवेशमा रोक ११ घण्टा पहिले